Notebook of Theingi Nwai
TRANQUILITY, CALM & PEACEFUL CORNER FOR ME!!
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ် နိုင်တင်းကြောင့် လည်ပတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရုတ်တရက် ဆိုသလို ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြရတော့တယ်... ဘယ်အရာတွေ အရေးကြီးတယ်ပဲ ဆိုဆို ခုလိုအချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးဟာ ကျန်းမာရေး နဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ရေးပဲ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်.. ကူးစက်မြန် ရောဂါဆိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီဖြစ်စဉ်မှာ Butterfly effect ဟာ သိသာထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်... ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်ကိုယ်လို့ ယူဆထားတာဟာ မှားယွင်းကြောင်း လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းကြား ထင်ရှားစေခဲ့တယ်...
ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ နောက်ကျမှ ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဒီရောဂါကပ်ဆိုးအတွက် ပြင်ဆင်ချိန်တွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ်.. ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံမို့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ အပြိုင်တော့ ဘယ်လိုက်လုပ်နိုင်ပါ့မလဲလေ၊ ဒီလိုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် အားကိုးရာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ပိုပြီး သိသာထင်ရှားစေခဲ့တယ်၊ မိခင်နဲ့ တူတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ရယ် သူ့လူတွေကို မေတ္တာကရုဏာနဲ့ ထွေးပွေ့ ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ အရည်အချင်းပြည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ့်တွေရဲ့ ဘရမ်းဘတာ အကျင့်သဘာဝတွေနဲ့ ကိုယ့်အမျိုးတွေဟာ ခုချိန်ထိတော့ အထိအခိုက် အပျက်အစီး သက်သာနေတုန်းပဲလေ.. တိုင်းပြည်အတွက် အခြေအနေ နဲ့ အချိန်အခါကလည်း မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ်... မြန်မာတို့ရဲ့ သင်္ကြန်ချိန်ခါ အားလပ်ရက်ရယ် ကလေးတွေရဲ့ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေနဲ့ ဆက်လို့ သက်သာနေခဲ့တာလဲ ပါရဲ့...
ဘာရယ်မဟုတ်... ဘလော့ဂ်လေး အသက်ပြန်သွင်းဖို့ ....
အနီီးမႈန္.. “ေမာင္ ဒီေန႔ meeting ရွိုလို႔ေနာက္က်မယ္ေနာ္…သီရိ..” “ေအာ္…ဟုတ္.. သီရိလည္း ခုိင္ ရန္ကုန္ေရာက္တုန္း အိမ္လာလည္မယ္ ဆုိလုိ႔ ေစာင္႔ေနတာ… ဘယ္မွာလုပ္မွာလဲ.. meeting က..” “ ရံုးမွာပဲသီရိေရ.. နုိင္ငံျခားသားေတြပါမယ္.. ၿပီးရင္ေတာ႔ တခုခုလုိက္ေကြ်းရမွာေပါ႔..” “ ဘယ္ဆုိင္မွာလဲ..ေမာင္..” “ အနီးအနားက ေအးေအးေဆးေဆးဆုိင္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္မွာပါ.. ဒါလည္း မေသခ်ာေသးပါဘူး… ကိုယ္ ဖုန္းဆက္မယ္ေလ..” “ ဟုတ္… အျပန္က် ေခါက္ဆဲြေၾကာ္၀ယ္လာခဲ႔ေနာ္ေမာင္..ကေလးေတြ စားဖုိ႔..” “ အင္း..အင္း..ဟုတ္ၿပီ..ဒါပဲေနာ္” ခုိင္႔ကို အိမ္ျပန္ပို႔ေပးၿပီးအျပန္ စင္တင္ေတးဂီတရွိသည္႔ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ေရွ႕မွာ သူမရဲ႕ေမာင္႔ကားကို လွမ္းေတြ႔လုိက္သည္။ သူမ အဲဒီဆုိင္အျပင္ဘက္ေရာက္ေနမွန္း ေမာင္သိရင္ အံ႔အားသင္႔သြားေစခ်င္သည္။ ေနာက္ခ်င္စိတ္ျဖင္႔ ဆုိင္အျပင္ဘက္မွာ ကားရပ္ၿပီး သူမ ေမာင္႔ဖုန္းကို လွမ္းေခၚလုိက္သည္။ ခ်က္ခ်င္း မကိုင္ေသး။ ေတာ္ေနၾကာမွ ဟဲလုိ..ထူးသံၾကားသည္…။ “ေမာင္..ဘယ္မွာလဲဟင္” “ ဧည္႔သည္ေတြကို ထမင္းလုိက္ေကြ်းေနတယ္ သီရိ” သူမ ေမာင္႔ကို ဆုိင္အျပင္ဘက္ လွမ္းထြက္လာတာျမင္လုိက္ရသည္.. “ဘယ္ဆုိင္မွာလဲ ..ေမာင္ရဲ႕” “ အဲ..မီလ်ံကြိဳင္မွာ….” “ သီခ်င္းသံေ
မောင်လူအေး လိုမျိုး ကိုယ့် ဇာတ်လိုက်ကို နံမယ်ပေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ ချစ်သူဘဝက ခေါ်တဲ့ နာမ်စားကို သုံးမလား။ မေလေး ဆိုတာက သိပ်နုနေသလိုပဲ။ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တယ် လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်မိ။ ချစ်သူဘဝတုန်းက အနုအရွမလုပ်တတ်တဲ့ သူက မနည်းစဉ်းစားပြီးု သုံးထားသည့် နာမ်စားမို့ အားနာနာနဲ့ လက်ခံထားရတာ။ တော်ကြာ ခေါင်းနောက်ပြီး နင်နဲ့ ငါနဲ့ဲပဲ အေးပါတယ်ဆို ရန်ဖြစ်စိတ်ကောက်ချိန်များတဲ့ သူတို့ချစ်သူဘဝ ရင်ခုန်စရာ အနုအရွ နာမ်စားလေးပါ မရှိပဲ ဖြစ်နေမစိုးလို့….။ ဒါဆို…မေလေးကို မကြိုက်ပြန်တော့ ပြောင်းပြန် လေးမေ ဆိုရင်ရော… စာရေးဆရာ ဦးသုမောင်က သူ့ချစ်ဇနီးကို လေးဘုံခေါ်သလား လေးမေခေါ်သလား…ဆရာမင်းလူရဲ့ မဟေသီနာမ်စားတခုလေးလား ရောထွေးသွားပြန်သည်။ နောက်တမျိုး စဉ်းစားစမ်းပါလေ…. ကိုယ့်ဘာသာ ဘလော့ဂါယောင်ယောင် စာရေးဖူးသူယောင်ယောင် လု နံမယ်ရှာရတာတော့ တော်တော်တော့ ခက်သားကလား။ နံမယ်ပေးကောင်းပုံတွေကတော့ ပြောမနေချင်တော့ပါဘူးလေ... ကိုယ့်သားသမီးတွေ နံမယ်တွေပဲ ကြည့်ဦး။ ပထမဦးဆုံး သားကြီးကျတော့ ကြာသပတေးသားမို့ " မိုး" သူ့ကို သွေးလှူပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ နံမယ် "ဟန်"၊ သူ့အဖေနံမယ် " ကျော်" ကို ယူပြီး မ
မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့ သာမန် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ပါ။ ဗုဒ္ဓကို ယုံကြည်သူ တစ်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လေးစားသူ၊ မြန်မာစာပေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူ။ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် မော်ကြွား ဂုဏ်ယူချင်သူ။
“သိပၸံေမာင္၀ ၏ စာမ်ား”
ႏွစ္သက္မိေသာ သူတုိ.၏ စကားမ်ား။